विश्वकप क्रिकेटबाट शिखर बाहिरिए, कसले पायो मौका ? « Kakharaa
विश्वकप क्रिकेटबाट शिखर बाहिरिए, कसले पायो मौका ?
काठमाडौं । आफ्नो शानदार खेलबाट प्रभावित पार्न सफल भारतीय क्रिकेटर शिखर धवनलाई एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटबाट बाहिरिएका छन् ।
दुई खेलमा ओपनर ब्याट्सम्यानको रुपमा मैदान उत्रिएका धवनलाई दोश्रो खेलमा औँलामा चोट लागेपछि उनी तेश्रो र चौथो खेल खेलेनन् । डाक्टरको सल्लाह अनुसार लामो समय आराम गर्नुपर्ने भएपछि अब उनले यो विश्वकप नखेल्ने भएका छन् ।
भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले शिखर धवनको स्थानमा पावर हिटर ब्याट्सम्यानको रुपमा परिचित ऋषभ पन्तलाई टीममा स्थान दिएको छ । बीसीसीआईले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटरमार्फत बुधबार शिखर धवनलाई जुलाईसम्म डाक्टरको निगरानीमा राख्नुपर्ने भएकोले उनले विश्वकपमा भाग नलिने जनाएको छ ।
यसअघि पाकिस्तानको खेलमा शिखर धवनको स्थानमा लोकेस राहुलले खेलेका थिए । अब उक्त स्थानमा ऋषभ पन्तले खेल्नेछन् । २१ वर्षीय ऋषभ पन्तले आईपीएलमा मात्र नभई इङ्ल्याण्ड, अस्ट्रेलियासँग भएको भारतको टेस्ट क्रिकेटमा शानदार प्रदर्शन गरेका थिए ।
शिखर धवनलाई चोट लागेपछि बीसीसीआईले ऋषभलाई केही दिन अघि इङ्ल्याण्ड बोलाएको थियो ।